डा. केसीसँगको पुरानो सहमतिमा सरकार फर्कियोस् : कांंग्रेस
काठमाडौं-प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले डा. गोविन्द केसीसँग विगतमा आफैंले गरेका सहमतिमा फर्कन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । बुधबार पार्टी कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सरकार डा. केसीसँग भएका सहमतिमा इमान्दार नदेखिएको भन्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन् । उनले विगतमा भएका सहमति तत्काल कार्यान्यवन गर्न पनि माग गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको दोहोरो भूमिकाका कारण डा. केसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए । प्रधानमन्त्रीकै अग्रसरता र बचनको सम्झौता इमान्दारीपूर्वक कार्यान्वयन हुन नसक्नु दुःखको कुरा भएको शर्माको भनाइ थियो । डा. केसी अनसनमा बस्दा स्वास्थ्यमा समस्या देखिन थालेपनि सरकार ‘संवेदना शून्य’ देखिएको उनले आरोप लगाए । सरकार संवेदनाशून्य ढंगले समाधानको विपरीत अघि बढ्न खोजेको भन्दै उनले भने, “यस्तो प्रवृत्तिको भत्र्सना गर्दै नेपाली कांग्रेस तत्काल पुराना सहमतिमा फर्कन र समाधानमा पुग्न सरकारलाई सचेत गराउन चाहन्छ ।”
उनले अब सरकारसँग दुई विकल्पमात्र रहेको बताए । “तत्कालै सहमतिमा फर्कने या चौतर्फी दबाब पर्खने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीका सामुन्ने दुई वटा विकल्प छन्,” उनले भने, “विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिन हामी विनम्र भाषामा अपिल गर्न चाहन्छौं ।”
त्यस्तै प्रवक्ता शर्माले वाइडबडी विमान खरिदको छानबिन आग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने बताए । विमान खरिद प्रकरणमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नाम जोडिएको विषयमा समेत ध्यानाकर्षण भएको शर्माको भनाइ छ । वाइडबडी खरिद प्रकरणमा गहिरो छानबिन हुनुपर्ने कांग्रेसको माग छ ।
विमान खरिद प्रक्रिया सुरु गर्दा पुष्पकमल दाहाल र विमान आउँदा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा सरकार रहेको बताउँदै सभापति शेरबहादुर देउवाको कांग्रेसले बचाउ गरेको छ । वाइडबडी खरिद काण्डमा पछिल्लो पटक देउवाको समेत नाम जाडेर आइरहेका बेला प्रवक्ता शर्मा भने, “पार्टी सभापति देउवा भर्खर प्रधानमन्त्री भएको बेला १९ वटा मन्त्रालय उहाँसँग थियो । त्यसको चार दिनपछि निगम सञ्चालक समितिको बोर्ड बैठकले मुद्रा सटहीका लागि अनुरोधको निर्णय गरेको थियो । क्याबिनेट स्तरीय वा प्रधानमन्त्रीस्तरीय कुनै पनि निर्णय भएको छैन ।”
सरकार बलियो, राष्ट्र कमजोर : सिटौला
झापा- नेपाली कांग्रेसका कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले सरकार बलियो, राष्ट्र कमजोर भएको तर्क गरेका छन् । बुधबार बिर्तामोडमा पत्रकार सम्मेलन गरी सिटौलाले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारका उपलब्धी नागरिकलाई दिन नसकेकाले राष्ट्र कमजोर भएको तर्क गरेका हुन् ।
सिटौलाले सरकार शक्तिशाली भए पनि शक्तिको प्रयोग गरेर जनचाहाना अनुरुप विकासको गति बढाउन नसकेको टिप्पणी गरे । “राष्ट्रको वर्तमान अवस्थाले नागरिकमा निराशा छाएको छ,” सिटौलाले भने, “मेरो झापाली साथीले राज्यलाई नेतृत्व दिँदै हुनुहुन्छ, कहाँ चुक्नुभयो ? आत्मसमीक्षा गरेर अघि बढ्नुहोस्, म झापाबाटै अनुरोध गर्दछु ।” देश संघीयतामा गए पनि धेरै जिल्लामा अझै पनि संघीयताको थिति बस्न नसकेको सिटौलाले प्रष्ट पारे ।
स्थानीय तहले कानुनको पालना गर्न नसकेको बताएका सिटौलाले भने, “एक जना शिक्षक नियुक्ति गर्न आवश्यक प्रक्रिया पनि स्थानीय तहले पु¥याउन सकेको छैन, जसले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर खस्काएको छ ।” सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताको समेत खिल्लि उडाएको भन्दै सिटौलाले आपत्ति जनाए । संविधानले खडा गरेको व्यवस्थामाथि प्रहार भएको जिकिर उनले गरे । प्रतिपक्षमा रहेर सरकारको काम नियालिरहेको कांग्रेस जनताको आवाज बोल्न पछि नहट्ने सिटौलाको भनाइ छ ।
सिटौलाले कांग्रेसले १४औँ महाधिवेश भन्दा अगाडि संक्रमणकालिन प्रबन्ध गर्ने र सातवटै प्रदेशमा प्रदेश स्तरको संगठन विस्तारमा कांग्रेस जुटेको जनाए । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको घोटालाको सम्बन्धमा महासमिति बैठकमा नै कांग्रेसले कारबाहीको माग गरेकाले छानबिनको प्रक्रिया चाँडै अगाडि बढाउनुपर्ने तर्क उनले गरे ।
उद्दण्डता बढेका मन्त्री सरकारमा भएकाले सचिवमाथि हातपात भएको तर्क सिटौलाले गरे । यसप्रकारका घटनाले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देशको सिर झुके उनको भनाइ छ । परिवर्तन नरुचाउनेहरुबाट विभिन्न गतिविधि सञ्चालन भएरहेकाले ती अतिवादी विचारलाई परास्त गर्न सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्नुपर्ने माग सिटौलाले गरे ।
१६ औँ अनशनमा रहेका डा. गोविन्द केसीको विषयमा सरकारले गरेका सम्झौतालाई लागू गर्न जोड दिएका सिटौलाले महाधिवेशन गर्न सक्ने अवस्थामा नेविसंघलाई पार्टीले पु¥याउनुपर्नेमा जाड दिए ।